Apple iri kutotumira rubatsiro kuBeirut mushure mekuputika kwakakomba pachiteshi | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura vhidhiyo yanga ichitenderera yekuputika uko kushamiswa kwakavhundutsa kwakaparadza mazana enharaunda. Nhau dzakashumwa kuti pakange paita kuputika kukuru muPort of Beirut. 2.750 matani eammonium nitrate yakanga yaputika ichikonzera mazana ezvakafa uye zviuru zvevanhu zvakasiiwa vasina zvivakwa zvavo. Iyo nhamo inoshumirwa uye Apple yanga isingade kutarisa kune imwe nzira uye Akazivisa kuti achabatsira vanhu veLebanese.
Takaverenga kakawanda iyo Apple haisi imwe kambani tekinoroji chete. Iri iboka revanhu vakazvipira kunharaunda, kuenzana, kubatana uye kurwisa rusaruraganda. Apple yaita mishandirapamwe yekubatsira kumatunhu akanyanya kushupika kana avo vakazviwana vari mumamiriro akashata pane imwe nguva. Iyo ine zvechigarire mishandirapamwe senge yayo RED zvigadzirwa, asi zvakare inotanga mishandirapamwe senge ichangobva kugadzirwa kweiyo Kuenzana uye kururamisira.
Nepachirwere checoronavirus, kuedza kubatsira vamwe hakuna kusiiwa shure. Yakagadzira mamirioni mari mipiro, yakagadzira zvirongwa zverubatsiro, manyorerwo ekushandisa kuti ubatsire vashandisi, akagadzira masiki ekumeso ... uye zvino nedambudziko rakaitika muBeirut semhedzisiro yekuputika, zvaisazove zvishoma.
Tim Cook akazivisa kuburikidza nesocial network Twitter kuti Apple irikuita zviwanikwa kune mashoma-kwenguva uye marefu-eruyamuro ekuyedza muBeirut. Mutungamiri weApple haana kutaura kuti kambani ichapa marii, asi zvakajairika kuti Apple ipe mamirioni erubatsiro rwemari mukuyamura njodzi. Sezvatakambokuudza kare. Haityiswe uye nemari hazvizove, chokwadi.
Apple iri kupa kumasangano ekuyamura ayo ari kubatsira nezvinodiwa nekukurumidza uye kutsigirwa kwenguva refu muBeirut. Tinoshungurudzika nevanhu veRebhanoni, vashandi vedu uye vese avo vakawirwa nedambudziko iri.
- Tim Cook (@iku_cook) August 7, 2020
Apple inogara iri kumusoro kwebasa mune aya mamiriro. Icho chinhu chekutenda kwazvo nacho munguva dzino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple iri kutotumira rubatsiro kuBeirut mukumuka kwekuputika kwakakomba pachiteshi
Firefox 79 ine malfunctions pane mamwe maMac